प्रभा माविलाई चौंरीदेउराली स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड - Radio Roshi
जिल्लाको चौंरीदेउरालीमा भएको पालिका स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता–२०७७ को शिल्ड वडा नं. ६ मा रहेको प्रभा माविले हात पार्न सफल भएको छ । चैत्र ११ गतेदेखि १४ गतेसम्म संचालित प्रतियोगितामा प्रभा माविले स्वर्ण पदक ८, रजत पदक ३ र कास्य पदक ४ गरी १५ पदक हात पार्न सफल भाएपछि राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड आफ्नो पोल्टमा पार्न सफ भएको हो ।
त्यसैगरि द्वितिय भने वडा नं. ३ मा रहेको बुद्ध हिमालय मावि भएको छ । उक्त विद्यालयले स्वर्ण पदक ५, रजत पदक ५ र कास्य पदक ५ प्राप्त गर्न सफल भएको थियो । त्यस्तै तृतिय पुरस्कार सिर्जनाशिल जनता माविले प्राप्त गरेको थियो । सो विद्यालयले ५ स्वर्ण, ३ रजत र १ कास्य पदक हातपार्न सफल भएको थियो । समापन कार्यक्रमको उद्घाट वागमती प्रदेश सभा सदस्य रत्न ढकालले गरेका थिए । विशेष अतिथि समेत रहेका गाउँपालिका अध्यक्ष दिननाथ गौतम र सांसद ढकाल भलिवलमा सहभागी भई ३ चरण सम्म खेलेर फाइनल भलिवल प्रतियोगिताको उद्घाटन भएको थियो ।
प्रतियोगितामा सूर्यदय माविले रजत २, खाँडादेवी माविले स्वर्ण १, बुद्ध हिमालय माविले स्वर्ण ५, रजत ५ र कास्य ५, सरस्वती माविले स्वर्ण २, रजत ३ र कास्य ५, जागृति माविले स्वर्ण २, रजत ५ र कास्य ७, अरनिको माविले रजत १, प्रभा माविले स्वर्ण ८, रजत ३ र कस्य ४, सिर्जनाशिल जनता माविले स्वर्ण ५, रजत ३ र कास्य १, देउराली माविले स्वर्ण १, रजत २ र कास्य २ हातपार्न सफल भएको छ ।
त्यसैगगरि प्रतियोगितामा विद्यार्थी प्रतिभा पहिचान अन्तर्गत २३ वटा विद्यालयका ४६ जना विद्यार्थीले भाग लिएका थिए । सो क्रममा १५ वटा विद्यालयले नृत्य र १० वटा विद्यालयले गायनमा भाग लिएको थियो । प्रतियोगिताको उद्घाटन संघीय सांसद गंगाबहादुर तामाङ (बमध्वज) ले गरेका थिए । राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगितामा १२ वटा खेल विधामा छात्र–छात्रा गरि २४ वटा टिमले भाग लिएको थियो । सो प्रतियोगितामा ३ सय १६ जना विद्यार्थीले भाग लिएका थिए ।
वायु प्रदुषण बढेपछि देशभरका शिक्षण संस्था चार दिन बन्द गर्ने निर्णय